१६ फागुन, जाजरकोट । अभिभावकको माया, स्नेहमा बस्न कसलाई पो मन हुँदैन र ? आफन्तले दिने सल्लाह अनि दिशानिर्देशबाट भावी कार्यसम्पादन गर्ने रहर नभएको को होला ? जनयुद्धकालमा बेपत्ता बनाइएका शिक्षक अहिले २० वर्षसम्म कहाँ छन् भन्ने परिवारलाई जानकारी छैन । दैनिक बुवाको सम्झनामा भेरी नगरपालिका–२ की शारदा शर्मालाई झस्काउने गर्दछ ।
जुनिचाँदे–४ का दलबहादुर रोकाको पनि शारदाको भन्दा कम पीडा छैन । उनी भन्छन्, “सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत दिने भनेको छ तर पनि अहिलेसम्म हामीले केही पाएको अवस्था छैन ।” छेडागाड नगरपालिका–१३ का मानबहादुर बुढाले आँखाभरि आँशु पार्दै भने, “बुवा गुमाउनुको पीडालाई कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ, अहिलेसम्म बुवाको अवस्था के छ भन्ने कुरा जानकारीसम्म नहुँदा हामी मानसिकरूपमा समस्यमा परेका छौँ ।” जाजरकोटबाट मात्र १२ जना बेपत्ता भएको सूची छ ।
उनीहरुको अवस्थाबारेमा परिवारले जति पटक दबाब दिए पनि अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवार पीडामा छन् । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसीआरसी) ले सन् २०१२ मा निकालेको तथ्याङ्कअनुसार जाजरकोटमा नौ जनाको नाम बेपत्ताको सूचीमा छ भने मृत्यु भइसकेको जानकारी भएका तर, मानव अवशेष पत्ता नलागेका तीन जनाको नाम सूचीकृत गरिएको छ ।